Gọọmentị India mebiri patent GSK maka ọgwụ ara ara Tykerb: GSK ọ ga-arịọrịrị mkpebi ahụ? - Ọgwụ 2022
Gọọmentị India mebiri patent GSK maka ọgwụ ara ara Tykerb: GSK ọ ga-arịọrịrị mkpebi ahụ?
Gọọmenti India akagbuola patent e nyere GlaxoSmithKline (GSK) maka ọgwụ kansa ara Tykerb. Nke a na-esote mkpebi gọọmentị gara aga na ọgwụ aha ya bụ Gleevec ejiri dị ka ụzọ mgbachitere mbụ megide ọrịa leukemia myelogenous na-adịghị ala ala (CML), ụdị ọrịa kansa ọbara, agaghị ekpuchi ya n'okpuru nchebe patent.
Ihe kpatara gọọmentị India ji na-ekwu na ọ naghị asọpụrụ ikike ikike ndị a bụ na ọgwụ ndị a bụ naanị mgbanwe nke kemịkalụ dịbu adị, yabụ na ọ siri ike ịtụle ihe ọhụrụ molekul. Ọtụtụ ndị na-eche na gọọmentị na-eme nke a ka ọgwụ ndị ahụ wee dị ọnụ ala, na ụdị generic ga-adị maka ihe karịrị otu ijeri ụmụ amaala obodo ahụ.
Na mbụ, GSK belatara ọnụ ahịa Tykerb otu ụzọ n'ụzọ atọ na India iji kwupụta nchegbu na GSK na-ana nnukwu ego maka ọgwụ na-azọpụta ndụ. India bụ ahịa mara mma maka ụlọ ọrụ ọgwụ na teknụzụ biotechnology n'ihi klaasị na-eto eto na ọtụtụ narị nde ndị nwere ike ịre ahịa ọgwụ ha.
Ejiri usoro yiri nke ahụ n'afọ gara aga maka Sutent, ọgwụ cancer nke Pfizer mere, na ọgwụ ụkwara ume ọkụ sitere na Merck.
Ndị otu India nke otu nlekọta ahụike German akpọrọ Fresenius Kabi Oncology kpalitere ma na-achụ ya ugbu a igbutu ikike ikike nke Tykerb. Ngalaba ahụ kwuru na molekul ọgwụ na-arụ ọrụ na Gleevec (nke a na-asụkwa Glivec) enweghị "ihe ọhụrụ."
"Mkpebi a dị ka iwu Glivec dị ịrịba ama. IPAB ekwuola na ụdị nnu nke lapatinib enweghị ike ijide patent, "ka ọka iwu Dominic Alvares nke S Majumdar & Co., bụ onye nọchitere Fresenius Kabi na ikpe ahụ.
"Anyị na-amụ mkpebi nke IPAB mana anyị na-ejigide nkwenye anyị na mmepụta nke nnu lapatinib ditosylate, anyị ga-atụlekwa ohere nke ịme ihe ọzọ n'ihu ndị ọchịchị kwesịrị ekwesị iji kwado nke a," ka ndị India kwuru na ozi e-mail na Reuters na Fraịde..
GSK ji n'aka na ọ ga-agbaso nke a n'ihi na ọ na-esetịpụ ụkpụrụ maka mba ndị ọzọ iji mebie patent nke na-echebe ọgwụ ha na-eri ijeri dollar kwa afọ site na asọmpi ruo ọtụtụ afọ.
Nsogbu na-adịte aka maka nke a na ndị ọzọ dị ka ya bụ na nnukwu ụlọ ọrụ agaghị achọ ịmepụta ọgwụ ọjọọ ma na-emefu ọtụtụ ijeri iji mepụta ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na nchebe patent ha nwere ike iwepụ ngwa ngwa.